अहिले को युग के को हो भनेर प्रश्न गरियो भने, सबैले दिने जवाफ एउटै हुन्छ । यो सुचना प्रविधि, कम्प्युटर प्रविधिको युग हो । अनि यही सुचना प्रविधि तथा कम्प्युटर प्रविधिलाई लक्ष्य गरेर नेपाल मा पनि आइटि पार्क को स्थापना गरियो । काभ्रे जिल्लामा आइटि पार्क त बन्यो तर यो अहिले एकदमै प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको छ ।
सायद IT Park पनि एक दिन त सञ्चालन मा आउँला भनेर, दिन कुरेर बसिरहेको जस्तो आभाष मिल्छ । करिब ३०० रोपनी मा फैलिएको, अत्यन्तै रमणिय स्थलमा रहेको सम्पुर्ण सुविधायुक्त आइटि पार्क प्रयोग विहिन अवस्थामा छ । सायद यस्तो दयनिय स्थिति देखेर होला, अहिले हाम्रा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गणेश साह जुर्मुराएका छन् ।
हाम्रो कृषी युग थियो, अब को युग कम्प्युटर को युग हो भन्ने बुझेका मन्त्री गणेश साह आइटि पार्क चलाउनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । यसैको सुरुवाती कदम स्वरुप आज, वनेपाको आइटि पार्कमा एउटा सानो भलाकुसारी को कार्यक्रम राखिएको थियो । काठमाडौँ मा बसेर गफ हाँक्दैमा र आइटि पार्क को गफ दिँदैमा केही उपलब्धि हुँदैन भनेर नै यो कार्यक्रम आइटिपार्क मा नै गर्नुपरेको कुरा मन्त्रि साह ले प्रस्ट्याउनु भयो । कार्यक्रम मा आइटि पार्क हेर्ने उच्चस्तरिय सुचना प्रविधि आयोग (High Level Commission for Information Technology, HLCIT) का पदाधिकारीहरु, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिब, पत्रकार, स्थानिय निकायका प्रतिनिधहरु तथा आइटि मा संलग्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।
खास मा आज को कार्यक्रम मुख्य रुपमा, आइटि पार्कलाई कसरी सञ्चालन मा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उपस्थित व्यक्तिहरु ले आ-आफ्ना विचारहरु कार्यक्रम को दौरान राखेका थिए । आइटिपार्क मा कसरी कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्ने, कसरी चलाउने, के कस्तो सहुलियत, छुट दिने आदि विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । आज को कार्यक्रम अब नयाँ रुपमा अगाडि जानलाई निकै नै फलदायी हुने देखिन्छ ।
विभिन्न समयमा माओवादीको बम विस्फोटन बाट आइटिपार्कमा क्षती पुगेको रहेछ तर त्यसको मर्मतसम्भार अहिले सम्म पनि नगरिएको देख्दा साह्रै चित्त दुखेर आयो । आइटिपार्क हेर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोग को नाम चाँहि उच्चस्तरिय सुचना प्रविधि आयोग (High Level Commission for Information Technology, HLCIT) तर काम चाँहि खै, कुन स्तर को गर्‍यो, विश्लेषण गर्न गाह्रै छ ।
हुन त यहाँ, गफ दिने गरेका छन्, सुचना प्रविधी देश विकास को मेरुदण्ड हो तर पनि व्यवहार मा चाँहि, यो कुरा निकै पछाडि छोडिएको छ । यो आइटिपार्क बनाउँदा, यसको पनि एउटा भिजन थियो होला, केही सोचिएको थियो होला, खै ति कुराहरु कता गए ? हुन त, देशमा राजनिति स्थिर नभै’कन केही होला, जस्तो चाँहि लाग्दैन । आइटिपार्क जुन सोचका साथ बनाइएको थियो, त्यो कार्यान्वायन भएको छैन, कारण सरल छ, एउटा सरकारले नियम बनायो, अर्को ले त्यो फाइल कुन दुलो मा लगेर थन्क्यायो थाहा छैन ।
अझ भन्नुपर्दा यो पार्क टापुमा बनाइएको दरबार जत्तिकै भएको छ । हुन पनि सोच्ने हो भने प्रश्न उब्जन्छ - अन्य सुविधाहरु विकास नगरी यहाँ कसरी आइटी पार्क सफल हुन्छ र ? स्पष्ट दीर्घकालिन योजनाको अभावकै कारण झण्डै ३७ वर्ष अघि शुरु भएको नेपालको सूचना प्रविधिको यात्राले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । हरेक वर्ष बजेट भाषणमा गरिने इ गभर्नेन्स, इकमर्श जस्ता ठूलठूला प्रतिबद्धताहरु कागजमै सिमित छन् । गतवर्ष राष्टिय योजना आयोगले जारी गरेको तीन वर्ष अन्तरिम योजनामा सम्पूर्णआइटी क्षेत्रका लागि रु ४० करोड मात्रै विनियोजन गरियो ।
यसले रोजगारी र कारोबारका हिसाबले पनि संसारमै सबैभन्दा बढी अवसर र सम्भावना भएको क्षेत्र , सरकारी नीति निर्माताहरुको आँखामा पटक्कै पर्न नसकेको बुझाउँछ । अहिले सम्म नेपालमा जम्मा ७० वटा मात्र टेलिसेन्टर स्थापित छन् । जब कि १० औँ पञ्चवर्षिय योजनामै १५०० केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यता सरकारी कार्यालयहरुलाइ आइटीको सञ्जालमा प्रवेश गराउने घोषणा वर्षौँ अगाडि गरिए पनि एकाध कार्यक्रमहरु बाहेक अन्य कुनै पनि योजनाहरु अगाडि बढेका देखिदैनन् ।
अझै पनि मालपोत,नापीजस्ता सामान्य जनताको पहुँच हुने निकायहरु कागजी 'ढड्डा'मै चलिरहेका छन । त्यसो त नागरिकता पासपोर्ट सवारी साधनको लाइसेन्स वितरणमा पनि सूचनाप्रविद्यिका खासै प्रयोग देखिदैन । भर्खरै 'एक बिद्यार्थी एक ल्यापटप' कार्यक्रमले बजार ततायो र तताइरहेको छ । भएका सम्भाव्यता र अवसरहरुलाइ सदुपयोग गर्न त परै जाओस संसारमै असफल भैसकेका यस्ता महत्वकाक्षी कार्यक्रमहरु लाइ सरकारी स्तरबाटै नेपालमा लागू गर्न खोज्नुलाइ नीतिनिर्माताहरुमा रहेको अदूरदर्शिता झलकाउछ ।
सरकारले त केही गरेन गरेन यहा नीजिक्षेत्रले पनि सम्पूर्णरुपमा सूचनाप्रविधिलाइ अङ्गिकार गर्न सकेको छैन । औपचारिकता निर्वाह गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष क्यान इन्फोटेक गर्नमै व्यस्त कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल ( क्यान ) को उक्त मेला पनि व्यापार मेलामै सीमित हुन पुगेको छ । यसले सूचनाप्रविधिको प्रयोग,विकास र विस्तारमा न त योगदान नै गर्न सकेको छ, न नीजिक्षेत्रलाइ उत्साहि नै ।
गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो देश त्यति कटीबद्ध देखिदैन । सिक्नको लागि कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु सर्वसुलभ नहुँदा ज्ञान हासील गर्न थुप्रै युवाहरु धेरै खर्च गरेर विदेसिन्छन र अवसर मिलेमा स्वदेश फर्कन हिच्किचाउछन् । यसले दक्ष जनशक्तिलाइ नेपालबाट धपाइरहेको छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले श्रृजनात्मक क्षमता बोकेकाहरुलाइ आफ्नै देशमा अवसर मिलाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता र चुनौति पनि हो । इन्टरनेट तथा कम्प्युटर को प्रयोग बढेपनि त्यसको उपयोग शहरमा अनि त्यो पनि सामान्य सर्फिङ,च्याट,इमेल र टाइपमै सीमित छ । यसले आइटीको प्रभावकारीता र यसको माध्यमबाट हाम्रो देशले अपेक्षिित लाभ पाउन नसक्नुको रहस्य तफ संकेत गर्छ ।
मुख्य रुपमा अब कसरी आइटि पार्क चलाउने, कसरी कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा आज प्रारम्भिक चरण को छलफल भयो । आज को जोश हेर्दा त, आइटिपार्क छिट्टै नै सञ्चालन मा आउने छनक देखिन्छ । अब नियमित रुपमा, आइटिपार्क मै यस विषयमा छलफल हुने भएको छ, आगामी दिनहरुमा । आशा गरौँ, केही महिना भित्रै आइटिपार्क सञ्चालन मा आउनेछ ।
अस्ति राती, फेसबुक मा अचानक मन्त्री गणेश साह ले च्याटमा भन्नुभयो, म विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, पर्सी जनवरी ४ मा आइटिपार्क आउ है । हजुर हस्, मैले भने । म छक्क परेँ, ओहो, के रहेछ त्यस्तो आइटिपार्कमा मन्त्री ज्युले नै निम्तो दिनुभयो ।
त्यही भएर आज, बिहान आइटिपार्क लागियो, म अलिकति ढीलो भएछु । कार्यक्रम तल नै गरिएको रहेछ, न्यानो घाम मा , अनि त्यही ३०-३५ जना को उपस्थिति रहेको थियो । म १०-१५ मिनेट ढीलो पुगेको कारण, गेटपाले ले भित्र छिर्नै दिएनन्, भने यहाँ पत्रकारलाई मात्र छिर्न दिनु भनेको छ । लौ, आपत पर्‍यो । मैले भने मलाई मन्त्री ज्यु ले नै बोलाउनुभएको हो, उनी मैले भनेको के पत्याउँथे र ? अनि भित्र पहिले नै पुगेका एक साथीलाई फोन गरेर गेट मा बोलाएँ, अनि भित्र छिरियो ।
कार्यक्रम मा लामै छलफल भयो, सबैले आ-आफ्नो धारणा राखे, मैले चाँहि चुपचाप सुनिरहेँ, अब बोल्न को लागि पनि केही त थाहा हुनुपर्‍यो । मन्त्री ज्युले बोल्दा, मलाई तथा अन्य दुइ साथीलाई जोड गरेर बोलेको देख्दा, म मात्र हैन, उपस्थित सबैजना छक्क परे । मन्त्री ज्यु ले, मैले यिनीहरुलाई बोलाएको हुँ भन्दा, सबै छक्क परे । अनि हामी छक्क नपर्ने कुनै कारण नै थिएन ।
कार्यक्रम पछि, आइटिपार्क घुम्ने योजना अनुरुप सबै घुम्न लागे, म पनि जानै लागेको थिँए, वनेपाका रेडियो एबिसी एफएम का मधुसुदन गुरागाई ले मलाई हिँड्नै दिएनन् । मैले केही समय पहिले फेसबुक मा लेखेको कारण उनी रुष्ट हुन पुगेका रहेछन् । वनेपा को रेडियोले सबै फ्रिक्वेन्सी ढाकेर अरु रेडियो सुन्न डिस्ट्रब गर्‍यो भनेर मैले फेसबुक मा लेखेको थिएँ । त्यही कुरामा चलेको बहस का कारण उनीलाई रिस उठेको रहेछ । मैले जति भन्न खोज्दा पनि, उनले आफ्नै कुरा माथि पारे, मैले चुपचाप सुनिरहेँ । यता यसो भैरहँदा, माथि मन्त्री ज्युले चाँहि मेरो खोजी गरिरहनु भएको रहेछ, आकार खै भन्दै । म थिँए, यहाँ रेडियोको सम्बन्धमा डिस्कस गर्दै, त्यही भएर मन्त्रि ज्यु सित अनौपचारिक कुराकानी हुन भने पाएन । समग्रमा भन्दा, निकै अचम्म कै विच बित्यो आज को दिन ।
आइटि पार्क बारे यहाँ क्लिक गरि बुझ्नुहोस् ।
Dilip Acharya January 4, 2009 at 7:41 PM
साँच्चै यत्रो लगानी भएको र त्यत्रो सम्भावना बोकेको आईटि पार्कको उपयोग हुनु पर्ने हो, जे होस मन्त्रीज्युले यत्ती भएपनि तदारुकता देखाउनु भएछ त्यो पनि राम्रै हो।
अनि अर्को कुरा चाहि ब्लग र फेसबुककै माध्यम बाटै भएपनि मन्त्रीसंग समेत चिनजान र अन्त पनि परिचित हुनु भएछ त्यो भने निक्कै रमाईलो लाग्यो ।
Aakar January 4, 2009 at 8:13 PM
आइटि पार्क खै, अब चाँहि चल्छ कि, यसै हिसाब ले चासो राख्ने हो भने, अन्यथा कठिन नै छ ।
अनि फेसबुक मार्फत, आज बोलाइएको भन्दा पनि सबैजना छक्क परे ।
केपीकाे कुरा January 4, 2009 at 11:00 PM
खइ के भन्ने यार आइटी पार्क भएको गाउंमा साइवर क्याफे भेट्न मुस्किल रहेछ । ब्लगको बारेमा गफ गर्दा पत्ता लाग्यो धेरै बनेपाली अझै सूचना प्रविधिको पहुच बाहिर नै छन । आइटी पार्क काभ्रेको मात्र हैन नेपालको सपना हो । तर धेरैले त्यसलाइ काभ्रेको सपनामा मात्र सिमित गर्ने प्रयास गरेका छन । जो विडम्बनापुर्ण हो । बनेपा आएको बेलामा आइटी पार्क घुम्ने खुव जोश चलेको थियो तर साथिहरुले दिक्क लाग्छ भनेपछि जाने जागर पनि हरायो ।
Unknown January 5, 2009 at 5:52 AM
साँच्चै रमाईलो त तपाईंको अफबिटको कुरा लाग्यो । आइटि पार्क चैं अब नियमित उतै छलफल हुने भनेपछि सञ्चालनमा आएकै ठहरिने भयो ।
Anonymous January 5, 2009 at 12:06 PM
Nice reading...baafre..babu le ta yetti ramro lekheko dekhera ma chakka pare...
Its really nice to read you aakar, nice to know that because of facebook that you were called ....its great to know it...I wish to visit the IT park too....
Anonymous January 5, 2009 at 12:07 PM
btw, off beat is really wonderful..
Basanta January 5, 2009 at 12:22 PM
मन्त्रीको आँखा आफूमाथि पार्न सफल भएकोमा बधाई:)
यी मन्त्रीको बारेमा राम्रै धारणा थियो मेरो अहिलेसम्म, तर आजको कान्तिपुरमा यिनले पनि सोलार-माफियासंग मिलेर वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशकलाई हटाएको कुरा समेटिएको लेख छ विकास थापाको। यी पनि उहि ड्याङका मूला त परेनन् भन्ने चिन्ता पो शुरु भएको छ अब।
Anonymous January 5, 2009 at 8:29 PM
कुरै, कुराको देश अनि लुट्ने र लुटाउने सस्कार माझ केहि हुन्छकि! आशा गर्औ !
Eternal November 12, 2010 at 4:31 AM
दीपक जडित November 12, 2010 at 4:31 AM